Uqalile ukuzwakala emsakazweni uRibs | News24
DurbaN - Uqalile ukuzwakala emsakazweni kaTbo Touch, iTouch HD, etholakala kwi-internet, uRebecca Malope.
Uzwakale okokuqala kulo msakazo kusukela ngoLwesine emini kugamanxe ihora lesi-12, kuyakwelesi-2.
Uhlelo awakala kulo ngolokusiza umphakathi ontulayo okuthiwa inhloso wukuwusiza uxoshe ikati eziko.
Zithe zibekwa nje ohlelweni uRibs noMfundisi Sechaba Mithiane batshela abalaleli ukuthi bazizwa bekwenkulu intokozo ukuqala lolu hlelo ngempumelelo.
OLUNYE UDABA:Umisiwe umfundisi othuke inhlamba emsakazweni
Bathole izingcingo ebezingena zilakanyana zibahalalisela.
UTbo Touch uthe uRebecca noMfuMithiane bashayela uhlelo lwezenkolo olusakazwa ngoLwesine nangeSonto olusihloko sithi Healing Zone lapho abalaleli bazobe bexoxa ngezinkinga zabo bebasiza.
"Sizonika ithuba abalaleli emiphakathini ukuba baqoke umndeni owodwa odla imbuya ngothi, njalo ngenyanga bese kuyiwa kuwo uyonikezwa usizo. Ngiyabethemba laba basakazi, bobabili bavele banegalelo emphakathini, bayaziwa.
URebecca ebuzwa ngokujoyina kwakhe lo msakazo uthe: "Ngithokoze kakhulu ukuba ngibe yingxenye yalo msakazo osuzakhele igama futhi ophethwe wuqweqwe lomsakazi odume umhlaba wonke uTbo Touch. Okungijabulisa kakhulu wukuthi sizobe sisiza nomphakathi ontulayo."
URebecca akasiye umafikizolo kwezokusakaza - vele kumanje wethula uhlelo iGospe Time ku-SABC2 ngamaSonto kusihlwa okuwuhlelo lomculo weGospel aselwethule iminyaka eminingi ngempumelelo.
UTbo Touch ushiye emsakazweni omkhulu iMetro FM nyakenye waziqalela owakhe onabasakazi abaziwayo okubalwa uTim Modise nabanye.